Ahoana ny fametrahana Android 1.6 na donut ao amin'ny htc G1 | Androidsis
Androany maraina dia nivoaka ny vaovao, Android 1.6 Tamin'ny fomba ofisialy aho ho an'ny Faran'ny terminal ADP1 ary ho an'ny Google Io2009. Ireo terminal ireo dia fitaovana izay Google nanomboka nivarotra indray mandeha Android raha toa ka ADP1 ary ny segondra dia nomen'ny Google ho an'ny mpanatrika sasany amin'ny farany hetsika antsoina hoe Io2009. Ireo rôma misy amin'ny Android 1.6 ho an'ireo terminal ireo ihany tamin'ny voalohany, nandritra ny tolakandro dia nisy olona nanandrana nametraka azy io a Magic Magic ( josan1990) ary niasa koa izy io, fa ny fametrahana dia tsy hoe sarotra be izany fa mila baiko amin'ny adb. Ahoana no hatao raha tsy izany ny zazalahin'i xdadevelopers efa nanova roms miaraka amin'ilay fanavaozana izy ireo Android 1.6 o Donut fa saika ny terminal rehetra dia izao no manazava ny Htc G1.
Ny zavatra voalohany holazaina dia satria tsy fanavaozana ofisialy ity terminal ity, dia raha te hametraka ity rom ity dia ilaina ny fidirana amin'ny faka. Koa satria androidsis Tsy tompon'andraikitra amin'ny fahasimbana mety haterak'ilay fitaovana izahay (fa tsy tokony hisy na inona na inona).
Raha vantany vao nohazavaina ity dia esorinay eto ilay rom resahina. Vantany vao alaina, dia adikao amin'ny Sd ary soloinay anarana ho fanavaozana.zip. Vonoinay ny telefaona ary ampodintsika amin'ny fomba fanarenana (HOME + On), hanao backup aho raha sanatria ka misidina, avy eo manao Wipe isika avy eo izay vao mila mametraka ny fanavaozana. Araka ny hitanao dia mitovy amin'ny rom misy azy. Nanome ahy olana kely aho ary rehefa nesorina ireo litera android nandritra ny fandefasana entana, dia nijanona mainty ary tsy nisy fomba hitohizany, raha toa ka izany no mitranga aminao, aza matahotra, mila mamolavola ny fizarazarana EXT2 ianao ary manomboka indray.
Miaraka amin'ity rom ity ananantsika Donut, fidirana amin'ny faka, A2sd, compcache alefa ary IME.
Hitanay ao amin'ny forum ny fisalasalana, ny olana ary ny tolo-kevitra rehetra. MISAOTRA
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Rom » FOMBA FAMASINANA ANDROID 1.6 SA AZA ATAO AMIN'NY HTC G1
Salama, efa nakariko ilay rom, fa ny ampahany farany kosa tsy nandeha tsara. Midika ve izany fa aorian'ny fampiharana ny fanavaozana dia mety ho mainty ny efijery rehefa manomboka izy? Raha eny, ahoana no fomba hamolavolana ny fizarazarana EXT2?
Eny, vitako ny nanao ny dingana rehetra ary rehefa nanomboka voalohany aho dia mainty ny efijery ary tsy navesatra. Mba hamolavolana endrika, dia vonoinao ny telefaona, esory ny karatra ary ampifandraiso amin'ny solo-sainanao ilay endrika mitovy amin'ny nataonao teo aloha. Raha tianao dia manaova kopian'ny folder misy anao amin'ny ext2 ary aorian'ny famolavolana sy fanombohana tsara ny telefaona dia averinao any amin'ny ext2 izy ireo ary efa manana ireo rindranasa napetrakao teo alohan'ny nametrahana azy indray ianao.
bellkhaire dia hoy izy:
Nametraka ny rom aho ary mandeha tsara. Ny olana tokana ananako dia ny fakantsary sy ny programa sasany izay milaza fa tsy azo soratana ny karatra fitadidiana.
Namolavola endrika aho, nanova ny karatra ho an'ny fametrahana indray fa tsy mandeha izany.
Mamaly an'i bellkhaire
Opsss, sendra ahy ny nilazany tamiko fa mila mampihetsika ny Sd aho vao afaka mampiasa azy. Tsy maintsy hanadihady isika
Misaotra anao nanazava io teboka io tamiko. Antocara, raha ny fanazavana, manana ny olana nanjo an'i bellkhaire ianao?
Belkhaire dia hoy izy:
Nataoko endrika ilay karatra, novaina hafa aho. Avereno ny fizara + esory + apetraka ary hianjera hatrany.
Parami izay tsy maintsy tsy fahombiazan'ny rom.
Mamaly an'i Belkhaire
Tamin'ny farany dia tsy maintsy nametraka kinova vaovao an'ny rom kinova 2 aho ary mandeha tsara ny zava-drehetra.
Aiza ny rohy hanovana azy?
Version 2? Ary avy taiza ianao no nahazoana an'izany?
Eny, misaotra Anao. Niova ho an'ny kinova vaovao ny rohy
dukema dia hoy izy:
Misy tutorial ho an'ny Hero sa mitovy amin'ny an'ny Magic? Nisy nanandrana maherifo ve?
Mamaly an'i dukema
Tsy ho an'ny fotoana ho an'ny Mahery fo izany, fa azo antoka fa tsy haharitra ela
DAI Medium dia hoy izy:
Lahatsoratra tena tsara, misaotra.
Valio ny DAI Media
Misaotra anao mitsidika
gorke dia hoy izy:
Salama, nanavao aho, namafa teo aloha aho ary lojika fa "very" ireo rindranasa efa napetraka. Ny tena izy dia aorian'ny fanamboarana ny APN sy fametrahana ny anarako gmail. Tsy haiko hoe ahoana rehefa avy nitady ny Tsena aho dia nahita ny lisitry ny rindranasa nananako (ny sasany efa nandoa vola) izay tokony ho eo amin'ny karatra, ka nametraka vitsivitsy aho ary nandao ny ambiny noho ny tsy fahampian'ny fotoana. Ny zava-misy dia izao tsy haiko intsony ny fomba hahatongavana amin'io lisitra io, nivoaka niaraka tamin'ny sary masina sy ny zavatra rehetra izy
Mamaly an'i gorke
Ao amin'ny fizarana fampidinana eo amin'ny tsena, manandrama any
John alexos dia hoy izy:
Salama, manana ny G1 aho, ary te hanavao ny kinova OS. (HERO), fa manana ireto fangatahana manaraka ireto aho
Ny G1 dia voavaha, amin'ny fotoana fanavaozana ny Hero OS, very ve izany fampiasa izany? Hanidy indray ve ny findaiko?
RAHA tsy mety amiko ny fanavaozana, inona ny fomba tokony hatao hanaovana rollback?
Valiny tamin'i John Alexos
Inona no tianao holazaina amin'ilay mahery fo?
Azafady, angamba tsy nohazavaiko tsara ilay izy, tsy misy ifandraisany amin'ny fametrahana ny HTC Hero rom amin'ny G1 ahy, raha apetrako izy io, mety ho very ve ny famohana?
Ary raha misy ifandraisany amin'izy ireo, raha toa ka tsy voalamina tsara izy io, ahoana no fomba hiverenako? sa tsy misy miverina?
Tsy fantatro raha azoko tsara ny anao. Te hametraka ny htc hero rom amin'ny G1 ve ianao? Inona no rom tianao hapetraka manokana?
Salama, mila ny fanampianao azafady, averiko indray ny g1-ko ary izao dia tsy te-handrehitra ny application wi fi, na ny bluethoot, raha misy olona afaka manampy ahy, mankasitraka indrindra ireo hevitrao, arahaba sy fisaorana
Victorino 38 dia hoy izy:
taloha aho mila manana partitions amin'ny sd hametrahana ny donut
Valiny tamin'i Victorino 38